विपन्न विद्यार्थीलाई पोसाक उपहार
काठमाडौं । पूर्वखोला गाउँपालिका-६, हेक्लाङका महिलाहरुले आफंै कपडा सिलाएर सरकारी विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क विद्यालय पोसाक (ड्रेस) उपहार दिएका छन् । सिलाइकटाइ तालीम लिँदै आएका ६२ जना महिलाले ५ विद्यालयका विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक सिलाएर दिएका हुन् । जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका ६१...
सरकारी विद्यालय गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने...
असार २२, 2075 काठमाडौं । विद्यालयलाई भौतिक रुपमा मात्र नभइ गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । बूढानीलकण्ठ वडा नं २ स्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले सरकारी व...
किन प्यूठानमा दिनहुँ हुँदैछन् विद्यार...
असार २२, 2075 प्युठान । घरबाट विद्यालयसम्म आउँदा उनीहरु ठीक हुन्छन्, तन्दुरुस्त हुन्छन् । तर, दोस्रो वा तेस्रो घण्टी पढ्न नपाउँदै चिच्याउन थाल्छन् । कक्षा कोठामा कोही अचेत र कोही अर्धचेत हुन्छन् । भट्ट यो तस्विर हेर्दा लाग्न सक्छ यहाँ ...
पैसावालाको प्रभावमा मन्त्रीः आँफैले ल...
असार १९, 2075 काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफैँले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिमार्फत जारी गरेको अध्यादेशविपरीत चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रयासमा छन् । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार चिकि...
प्रशासनकै गेटमा धर्नामा बसे केसी
असार १६, 2075 जुम्ला । डा. गोविन्द केसी आफ्ना समर्थकसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै गेटमा धर्ना बसेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल रोजेका डा. केसीलाई २ सय मिटर वर नै सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि प्रशासन अगाडि नै ध...
ल हेर्नुस्, कलेज भर्ना गराउँदा पनि एज...
असार १२, 2075 काठमाडौं । शनिबार कक्षा १० को एसईई परिक्षाको नतिजा सार्बजनिक भयो । नतिजा सार्वजनिक भएकै भोलिपल्टका पत्रपत्रिकाहरुमा आएसँगै विद्यार्थीहरु कलेज दौडाहामा छन् । अहिले सकेसम्म बढी विद्यार्थी तान्ने खेलमा कलेजहरुले अनेकौं हतकण्...
एसईई नतिजाको गम्भीर गल्ती एक दिनपछि स...
असार ११, 2075 काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को परीक्षाफलमा प्रकाशन गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको छ । बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्दा परिक्षामा सहभ...
घट्यो एसईई उत्तीर्ण दर, खस्कियो गुणस्तर
असार १०, 2075 काठमाडौं । २०७४ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक त भयो । तर, यसको नतिजाले भने शिक्षा क्षेत्रमा निरासा तुल्याएको छ । एसइईमा २५ विद्यार्थीले सबैभन्दा माथिल्लो जिपिए ४.० ल्याएका छन् । आठवटै विषयम...
बल्ल आयो एसईइको रिजल्ट, कसरी थाहा पाउ...
असार ९, 2075 काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्ष सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७४ को नतिजा प्रकाशन गरेको छ । बोर्डले आज दिउँसो ४ बजे नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताए पनि प्राविधिक समस्या जनाउँदै तोकिएको समयभन्दा पौने...
एसईईको नतिजा आज ४ बजे सार्वजनिक हुने
असार ९, 2075 काठमाडौं । गत चैत महिनामा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा आज सार्वजनिक हुने भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीले नतिजा प्रकाशन गर्न शनिबार दिउँसो ३ बजे बोर्ड बैठक बोलाएको छ । गत चैत ८ बाट सञ्च...
कक्षाकोठामै विद्यार्थी मुर्छा पर्न था...
असार ५, 2075 कैलाली । कैलाली जिल्लाको एक विद्यालयमा शिक्षकले कक्षाकोठामा पढाउँदा पढाउँदै विद्यार्थी मुर्छा पर्न थालेपछि विद्यालयको पढाई नै प्रभावित भएको छ । बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ खैरेनीस्थित जगदम्बिके भगवती माविमा विद्यार्थी पढ्दै ग...
स्तरीय शिक्षाका लागि सहकार्यको खाँचो
असार २, 2075 काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच स्तरीय शिक्षा आदान प्रदानमा सहकार्यको खाँचो रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इस्ट चाइना युर्निभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीका प्रमुख प्रा. लिउ युस्याङ्गको उपस्थितिमा नेपाल ...
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हक लाग...
जेष्ठ २७, 2075 काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले संविधानमा व्यवस्था गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धि मौलिक हकलाई लागू गराउन तत्काल कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आई...
६० हजार बालबालिकालाइ विद्यालय ल्याउन ...
जेष्ठ २१, 2075 काठमाडौं । सरकारले सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन प्रयत्न गरेर भर्ना अभियान चलाएको भएपनि अझै ६० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् , विद्यालयबाहिर रहेका ति बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन ‘विशेष भर्ना अभियान’ सञ्चालन गर्न...
कक्षा ११ र १२ को संकाय हट्यो
जेष्ठ १९, 2075 काठमाडौं । सरकारले कक्षा ११ र १२ को संकाय हटाएको छ । ११ र १२ मा चार विषय अनिवार्य समेत गरिएको छ । भने कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्र...
← अघिल्लो 12… 26 27 28 29 30 31 32 33 34 … 42 43 पछिल्लो →